Warshadda Biladaha - Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Biladda Shiinaha
Biladaha waa hab xiiso leh oo lagu abaalmariyo guulaha tacliimeed. Waxaan wadnaa saf buuxa oo ah biladaha guusha la gaari karo ee abaalmarinno badan u samayn doona ardaydaada sannadkan. Ugu hambalyee shaqada ay si fiican u qabteen shinnida higaadda, ama u dir iyaga oo wata qaab iyo sharaf ay ku qalin jabinayaan. Waxaan qaadnaa bilado ku dhowaad munaasabad kasta oo tacliimeed.
Abaalmarinta Crown waa soo saaraha koobabka ugu weyn ee Ameerika. Haddii aad u baahan tahay koob wacyi-gelin ah, billad wacyi-gelin ah, astaamo wacyi-gelin ah ama wax ka badan, abaalmarinnadayada Wacyigelintu waxay la yimaadaan dib-u-habeyn degdeg ah iyo qanacsanaanta macaamiisha 100%.
Ku guuleysiga waxqabadka sandlot wuxuu u qalmaa abaalmarin sare. Xulashadayada billadaha baseball waa hab fiican oo loogu dabaaldego kuwa orodka guryaha lagu ciyaaro! Waxaa jira qaabab iyo cabbirro aad u tiro badan, wax ku habboon dhadhan iyo miisaaniyad kasta. Billad kastaa way fududahay in lagu qaabeeyo xulasho ballaaran oo xargaha ku lifaaqan oo laga kala xusho iyo, in yar oo dheeri ah, oo xardhan shaqsiyeed xagga dambe! Sida had iyo jeerba, biladeenu waxay la yimaadaan maraakiib deg deg ah oo dammaanad leh iyo qanacsanaanta macaamiisha 100%.
Ku dabbaaldeg guushii maxkamadda kubbadda koleyga iyadoo billad laga helay Kingtai! Waxaan bixinaa bilado kala duwan qaabab kala duwan, cabirro iyo midabbo, dhammaantoodna waa la habeyn karaa. Billad kastaa waxay la timaaddaa xulasho ballaaran oo xargaha ku lifaaqan iyo, in yar oo dheeri ah, oo xardhan shaqsiyeed xagga dambe. Iyada oo bilado tayo sare leh leh sida qiimaha weyn, dhoofinta degdegga ah ee dammaanad qaadka ah iyo 100% qanacsanaanta macaamiisha, waa slam dunk!
Lagu sameeyay Mareykanka, biladdeennii 500 ee taxanaha ahaa waa kuwo tayo gaar ah leh. Mid walbana waxaa laga sameeyaa naxaas adag (dhammaystiran dahabi ah oo dahab ah), nikkel adag (qalin lacag dhammeeyay) ama naxaas adag (dhammaystiran naxaas). Cabbiraadda 2 diameter dhexroor iyo .102 (10 guage) oo dhumuc leh, billadahaan waa xirfad heer sare ah oo millateri eegaysa oo leh dareen aad u culus oo "wax ku ool ah" iyaga. Dib-u-dhiska dabaqyada biladani waxay ku habboon yihiin ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo yar yar oo laser lagu xardhay oo laga heli karo ...
Ma waxaad raadineysaa wax ka duwan? “U kaxee guriga” iyada oo la siinayo Billadaha Abaalmarinta Gurigeenna oo ah mid ka mid ah billadahayaasheena waaweyn (3-3 / 4 ″) ama kuwa ugu waaweyn (4-3 / 4 ″)! Ka samaysan 100% laser cut acrylic, iyo 1/4 ″ qaro weyn, bahalladan waa weyn yihiin oo midabbo badan yihiin. Qoraalka midabbada leh iyo sawirada midabada leh ayaa si toos ah dusha loogu daabacay suufka UV-ga ah ee la daaweeyay ee kor u qaadaya muuqaal qurux badan oo adkaysi u leh (midani ma ahan warqad yar oo raqiis ah !!) Biladaha waxay la yimaadaan lacag la'aan lacag la'aan ah 1-1 / 2 ...
Biladaha DCM Decagon waxay keeneen qaab muuqaal jajab leh oo leh sawir casri ah. Waxaa laga sameeyay alwaaxda birta lagu shubay oo leh dhammad madow, dhammaan biladaha DCM waxay cabiraan 2 "dhexroor, waxayna leeyihiin midabyo cadcad oo soosaaraya muuqaal dhalaalaya.